Tag: Soomaalia | Sagal Radio Services
Dowladda Soomaaliya oo baaq nabadeed u dirtay Beelaha ku dagaalamaya Gobolka Sool
Dowladda Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u dirtay beelaha ku dagaalamaya Gobolka Soomaaliya, iyadoo ugu baaqday waxgaradka, salaadiinta iyo culumaa’udiinka inay u istaagaan joojinta dhiigga walaalaha ee daadanaya.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta xarriga ka jaray dhismaha xarunta Aqalka Sare (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • January 5, 2017
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka xarunta KMG ah Aqalka Sare ee Barlamaanka cusub ee Soomaaliya, iyadoo dhanka kale furay Kalfadhiga koowaad ee Aqalka Sare.
Abaar ba'an oo wali ka jirta gobolada dhexe
Ayadoo wali abaar ba'an ay ka jirto gobolada dhexe ayaa haatan waxaa lagu soo waramayaa in biyo la'aan ba'an darteed dadka iyo duunyaduba ay geeri qarka u saaran yihiin deegaanka Kaxandhaale ee u dhexeeya Mudug iyo Galgaduud.
Xasan Sheekh “Koox gaar ah Musharax uma ihi, waxaa musharax u ahay dadka Soomaaliyeed” Daawo Video
Sagal Radio Services • News Report • December 16, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xoojiyay ololaha uu ugu jiro inuu Tartanka Madaxtinimada, isagoo mar kale doonaya inuu ku guuleysto kursiga Madaxweynaha Jamhuuriyada.
Madaxweynaha “Ciidamada qalabka sida duulaan ayay ku qaadeen Al-Shabaab”
Sagal Radio Services • News Report • April 1, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu xalay bilowday duulaan ka dhan ah Al-Shabaab, oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, iyadoo tan iyo shalay dhaq dhaqaaqyo ciidan laga soo sheegayay deegaano ka tirsan gobolada dalka.
Khilaafka Guddoomiyaha Maxkamadda sare iyo xeer Ilaaliyaha oo xoogeystay
Khilaafka u dhexeeya xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa cirka isku sii shareeraya, iyagoo maanta ay labadan mas’uul warbaahinta isku mariyeen hadallu u muuqday inay isku eedeynayaan.
Xeer Ilaaliyaha Guud oo sheegay inuu dhamaaday waqtigii Golaha adeega Garsoorka uu ku dhisnaa
Sagal Radio Services • News Report • October 18, 2014
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa sheegay inuu dhamaaday waqtigii Golaha adeega Garsoorka uu ku dhisnaa, lana baabi’iyay qaanuun ahaa, isagoo cadeeyay in loo baahan yahay in sharciga cusub la dhaqan geliyo.